HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ourdou Poloney Portogey Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Tambohon’i Itchan Kala, tanàna manan-tantara any Khiva
MARO ny anarana efa niantsoana ny “Tanin’ny Ouzbek”, na ny faritra misy an’i Ouzbékistan ankehitriny. Anisan’izany ny hoe: Transoxania, Ilay Tany eo Anelanelan’ny Renirano, Tartarie, ary Turkistan. Efa hatramin’ny taonjato faha-15 i Ouzbékistan no fandalovan’ny mpivarotra, rehefa mandeha amin’ny Lalan’ny Lasoà izy ireo. Nampifandray an’i Chine tamin’ireo tanàna manamorona ny Ranomasina Mediterane io lalana io. Ny lamba landy na lasoà izao no tena amidy any amin’ny tsenan-damba any Ouzbékistan. Hita any koa ny karipetra tsara tarehy vita amin’ny landihazo sy volonondry ary lasoà.
Nisy vokany teo amin’ny kolontsain’ny Ouzbek ireo olona maro nandalo tany. Namakivaky an’ireo tendrombohitra sy tany efitr’i Ouzbékistan, ohatra, ireo mpitari-tafika nalaza sy ny miaramilany. Anisan’izany i Genghis Khan, avy any Mongolia, sy Aleksandra Lehibe ary Timour. Tany no nahitan’i Aleksandra Lehibe an’i Roxane vady malalany. Tany koa ny faritra niavian’i Timour, ilay nitondra ny fanjakana anisan’ny nidadasika indrindra teo amin’ny tantara.
Feno trano tsara tarehy sy marevaka ny tanàn-dehibe any Ouzbékistan. Boribory ny tafon’izy ireny, sady vita amin’ ny kapila, ary manga ny lokony. Sekoly ny ankamaroan’ireny trano ireny.
Ny Lalan’ny Lasoà. Nampiroborobo ny varotra fahiny io lalana mandalo any Ouzbékistan io. Efa talohan’ny nahaterahan’i Jesosy izy io no natao lalam-barotra. Niova anefa izany tamin’ny faran’ny taonjato faha-15, rehefa nisokatra ny lalana an-dranomasina nankany Inde.
Manamboatra karipetra lasoà
Ny Ranomasin’i Aral. Io no farihy fahefatra lehibe indrindra eran-tany taloha. Miharitra anefa izy io satria avy ao ny olona no mitarika rano hanondrahana voly. Miara-miasa amin’ireo firenena any Azia Afovoany izao i Ouzbékistan mba hamahana an’io olana io.
Ny abidy ouzbek. Maro ny fiteny efa nampiasaina tany Ouzbékistan. Resin’ny Silamo io tany io, tamin’ny taonjato fahavalo, ka ny abidy arabo no nampiasaina. Rehefa lasa anisan’ny Firaisana Sovietika i Ouzbékistan, dia ny abidy latinina no nampiasaina ary nosoloana abidy sirilika tamin’ny 1939 tany ho any. Abidy nalaina avy amin’ny soratra latinina indray anefa no nampiasaina, rehefa nivoaka ny lalàna vaovao momba ny abidy ouzbek, tamin’ny 1993.
Mponina: 30 tapitrisa
Toetany: Maina ary tsy misy firy ny orana
Vohon-tany: Lemaka ny any amin’ny ilany andrefana ary be tendrombohitra ny ilany atsinanana